Digital Transformation Guide by YRYEA (13 Nov 2020) – YRYEA – Yangon Region Young Entrepreneurs Association
Digital Transformation Guide by YRYEA (13 Nov 2020)
မင်္ဂလာပါ အသင်းသားများ ခင်ဗျ
ထူးခြားအကျိုးရှိစေမယ့် Program လေးတစ်ခုကို YRYEA မှ စီစဥ်တင်ဆက်လိုက်ပါပြီ
"Digital Transformation Guide by YRYEA"
🔵 Who should attend?
New normal တွင် အသွင်ပြောင်းလဲလာသော လူနေမှုစနစ်ပုံစံ နှင့်အညီ လုပ်ငန်း၏ Day to Day လုပ်ငန်းသဘာဝများကို ရုံးမှ ဖြစ်စေ အိမ်မှ ဖြစ်စေ ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ရန် ပြောင်းလဲလိုသည့် လုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်သူများ တက်ရောက်သင့်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် မိမိတို့ရဲ့ Business များ ကို Digital Transform မည်သို့စတင်လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သိလိုလေ့လာလိုသော လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ယခုလက်ရှိတွင် ERP Software, Business Aupporting Ecommerce tools များ သုံးဆွဲလျက်ရှိသော Business များအနေဖြင့်လည်း မိမိသုံးဆွဲနေသော System များအား ပိုမို သိရှိနားလည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ယခု Training Program တွင် Theory အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ လက်တွေ့ အသုံးချမှုများအား သင်ကြားရန်အတွက် Workshop ပုံစံများဖြင့်လည်းကောင်း ပုံစံ ၂မျိုးဖြင့်သင်ကြားမည် ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များအား Software Company များမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Founder များမှ သင်ကြားပို့ချပေးမည့်ဖြစ်သောကြောင့် မိမိလုပ်ငန်းများကို Digital Transform ပြုလုပ်လိုသော သူများ တက်ရောက် လေ့လာသင့်ပါသည်။။
✅ What is digital transformation plan?
✅ Account, Taxation & Financial Ratio Analaysis
✅ Data mining and data warehouse
✅ Bill of materials
✅ Ecommerce and Payment System
✅ Logistics and Inventory Management System
✅ Admin & Collaboration Tools
✅ HRM & CRM Tools
YRYEA Executive and Gold Members - Free
Associate members & MYEA regional members - 75000 kyat
Non members - 150000 kyat
🔰How to join
CONTACT YRYEA office for registeration (09-266559322, 09-266559323, 09-266559324)
NOV 13, 2020, 7pm to 9pm (2days tranings/week x4weeks)
ယခု TRAINING တက်ရောက်သူတိုင်းအား Attendance 80% အထက် တက်ရောက်သူများ အနေဖြင့် သင်တန်းပြီး ဆုံးသွားပါက YRYEA နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းထားသော Company များ၏ Software များနှင့် Free Consultation ရယူ၍ မိမိတို့ သွားလိုသော Digital Transformation Plan နှင့် ကိုက်ညီသော Software များအား သတ်မှတ်ကာလအတွင်း FREE အသုံးပြု ခွင့်ရရှိရန် အခွင့်အရေးများရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ 💡ဒါကြောင့် အကျိုးရှိလှသော ဒီ Program လေးကို တက်ရောက်ဖို့ နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
← Support Our Heroes (5 Nov 2020)
Going Digital (22 Nov 2020) →